ဥရောပရဲ့အများစုကလှပမီးရထားဘူတာရုံများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ဥရောပရဲ့အများစုကလှပမီးရထားဘူတာရုံများ
အသက်သည်အကြောင်း ခရီးသွားခြင်း ထက် ခရီးလမ်းဆုံး, ဤအလှဆုံးရထားလမ်းဘူတာ၏ဖြစ်ရပ်အတွက် – တကယ်ပြောနေမှန်ကြောင်း. အများဆုံးခရီးသွားများအတွက်သူတို့၏အဘို့စမှတ်အဖြစ်ရထားဘူတာကိုချဉ်းကပ်နေချိန်တွင် ခရီးစဉ်, သင်တို့သည်ဤရထားဘူတာကိုအမှန်တကယ်မမေ့နိုင်သောဖြစ်ကြောင်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်. ဒါကြောင့်, သငျသညျဥရောပရဲ့အလှဆုံးရထားလမ်းဘူတာသုံးခုမှာကြည့်မယူကြဘူးဘာကြောင့်?
တင့်တယ်မီးရထားဘူတာအရေအတွက်ကကောက် 1 – အဆိုပါ Strasbourg Gare, Strasbourg, ပြင်သစ်
ပြင်သစ် Strasbourg ဘူတာရုံ
ဂျာမနီနှင့်အတူပြင်သစ်ရဲ့အရှေ့ပိုင်းနယ်စပ်အနီး, အဆိုပါ Strasbourg ၌တည်ရှိ၏တည်ရှိသည် Strasbourg မီးရထားဘူတာရုံ. It is the second largest in the country, and arguably the most beautiful.
အဆိုပါမီးရထားဘူတာရုံအပြင်ဘက်အပေါ်တစ်ဦးသည်ခေတ်သစ်ဖန်အဆောက်အဦးဖြစ်ပါတယ်. ဒါကြောင့်, သငျသညျအထဲမှာ step တစ်ချိန်က, သငျသညျအလငျးကိုမွငျပါလိမ့်မယ်, airy အာကာသနှင့်မင်အတွင်းရှိဘူတာရုံ၏သမိုင်းအလှ. ဤသည်မီးရထားဘူတာရုံသမိုင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်. ဒါဟာအတွင်းဖွင့်လှစ်ထားခဲ့သည် 1846 နှင့်ပြန်လည်တည်ဆောက် 1883. သင်မြင်မည်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ rounded ဖန်ဒြပ်စင်အတွက်ထည့်သွင်းခဲ့သည် 2007 အဆိုပါအထင်ကရဘူတာရုံကာကွယ်ပေးရန်.
သငျသညျကဘယျလိုထငျပါဘူး? ဖြစ် တစ်ဦးအလည်အပတ်တန်ဖိုးရှိ Strasbourg?
Antwerp ဗဟိုစခန်း, Antwerp, ဘယ်လ်ဂျီယံ
ဘယ်လ်ဂျီယံ Antwerp ဘူတာရုံ
အဆိုပါစကားလုံးရန်းပင်ကိုဖော်ပြရန်စတင်မထားဘူး Antwerp ဗဟိုမီးရထားဘူတာရုံ. The neo-baroque marvel seems more likeacathedral thanatravel center. အဆိုပါရထားဘူတာလည်းစကျင်ကျောက်နှင့်ကျောက်နဲ့လုပ်ထားတဲ့တစ်ကျယ်ဝန်းစောင့်ဆိုင်းအခန်းထဲမှာတပ်ဆင်ထား, ကြီးမားတဲ့နာရီတပ်ဆင်ထားခြင်းနှင့်ကြီးမားသောအမိုးခုံးများနှင့်ဖုံးလွှမ်းနေသည်.
ဤသည်ဘယ်လ်ဂျီယံအလှတရားဘုရင်က Leopold II ၏တောင်းဆိုချက်မှာ built နှင့်ကျော်ဘို့ငါတို့နှင့်အတူရှိခဲ့ပါသည် 110 နှစ်ပေါင်း. ဒါဟာယခုခရီးသည်ရထားအိမ်ရှင်အဖြစ်, အချင်းချင်းရထား, နှင့် Thalys မြန်နှုန်းမြင့်ရထား. ဒါဟာကျိန်းသေသင်လက်လွတ်ချင်ကြပါဘူးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်!
လူအတော်များများစဉ်းစားပါ Antwerp ထိုသူအပေါင်းတို့၏အလှဆုံးရထားလမ်းဘူတာဖြစ်ဘူတာရုံ.
မီးရထားဘူတာရုံစဝ် Bento ဖွစျပါတယျ, Porto, ပေါ်တူဂီ
ပေါ်တူဂီ Porto ဘူတာရုံ
ဤ train station is simply gorgeous and မူလစဝ် Bento ဖွစျပါတယျက de Ave-မာရီယာခရစ်ယာန်မယ်သီလရှင်ကျောင်းနှင့်ပြင်ပကနေ, ခရီးသွားများအတွက်အဆောက်အဦးလှပသော Parisian-စတိုင်ကြောကျခဲမျက်နှာစာရှိကြောင်းမြင်ရပါလိမ့်မည်.
အတွင်းပိုင်းသော်လည်းအစစ်အမှန်ဆုဖြစ်ပါသည်! ရှိပါတယ် 20,000 ပေါ်တူဂီထံမှပုံပြင်များကိုပြောပြကြောင်းအုပ်ကြွပ် သမိုင်းဝင်နှင့်, Valdevez ၏တိုက်ပွဲနှင့်ဆျူးတာ၏ Conquest နဲ့တူ. အနုပညာရှင် Jorge Colaçoများအတွက်အုပ်ကြွပ်ခြယ် 14 နှစ်ပေါင်းများနှင့်ပန်းချီကားများခုနှစ်တွင်ပြီးစီးတယ် 1916. သင်ဤအနုပညာအလုပ်သို့မဟုတ်သင့်မီးရထားလက်လွတ်ချင်ကြပါဘူး! 😉
သင်တို့သည်ဤလှပသောရထားလမ်းဘူတာမဆိုသွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြ? ကျွန်တော်တို့ကိုသင်၏ဓါတ်ပုံများ Tweet @SaveATrain Ready to book your next adventure? ထို့နောက်သွားရောက်ကြည့်ရှု www.saveatrain.com
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/europes-most-beautiful-railway-stations/ - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
#railwaystations ဘူတာရုံ ရထားခရီးသွား ခရီးသွား travelbelgium travelfrance travelportugal